गुल्मीमा जीप दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते बुधवार, कार्तिक १३, २०७६
पदयात्राको पहिलो अनुभव मंगलवार, कार्तिक १२, २०७६
यसरी शुरु भयो भाईटीका मंगलवार, कार्तिक १२, २०७६
भाइटीकाका लागि कुन–कुन रंग प्रयोग गर्ने ? काठमाडौँ – प्रत्येक वर्ष कात्तिक शुक्ल द्वितीयाका दिन मनाइने हिन्दु नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहारको मुख्य दिन आज दाजुभाइले दिदीबहिनीबाट टीका ग्रहण गर्दैछन् । मंगलवार, कार्तिक १२, २०७६
'अशुभ सन्देश प्रवाह गर्ने पन्छी' कागको पूजा तिहारमा किन ? काठमाडौं । यमपञ्चक शुक्रबार बेलुकीदेखि नै शुरु भए पनि काग तिहार भने शनिबार मनाइँदै छ । शनिवार, कार्तिक ९, २०७६
भाइटीकाको भोलिपल्ट पनि सार्वजनिक बिदा काठमाडौं । सरकारले यही कात्तिक १३ गते अर्थात् भाइटीकाको भोलिपल्ट पनि सार्वजनिक बिदा दिएको छ । बिहिवार, कार्तिक ७, २०७६
भैरहवामा बजार अनुगमन, म्याद सकिएका खाद्यवस्तु बरामद भैरहवा । नगर क्षेत्रभित्र रहेका किराना, खाद्यान्न, होटल तथा मिठाई पसलहरुमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले अनुगमन गरेको छ । बुधवार, कार्तिक ६, २०७६
तानसेन र बटौलीको साइनो हिउँद लागेपछि दुई चारपरिवारहरु मिलेर बुटवलतिर लाग्ने आइटेनरी बन्ने गर्दथ्यो । यसरी बुटवलतिर लाग्दा अर्कै रमाइलोको महसुस हुने गर्दथ्यो । घरको झ्याल ढोकाहरु डम्माडम्मी बन्द गरी नजिकका आफ्ना मानिसहरुलाई ‘लौ है ! घर हेरिदिनु होला’ भनी जिम्मा लगाइन्थ्यो । हिउँद लागेपछि लालुपाते फूलको जवानीले उर्वीलाई रक्त्याम्य पार्ने गथ्र्यो । परदेश लाग्दा साइत जुराइ हिड्ने चलन थियो । यात्रा गर्दा परेक र बारले ठूलो महत्व राख्थ्यो । मंगलवार, कार्तिक ५, २०७६
बुटवलमा बजार अनुगमन, अखाद्य वस्तु बिक्री गर्नेका सामान नष्ट बुटवल-तिहारलाई केन्द्रित गरेर बुटवलमा बजार अनुगमन शुरु भएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका उपभोत्ता हित संरक्षण समितिले गरेको अनुगमनमा किराना पसलहरुमा लेवल विनाका अखाद्य बस्तुहरु बिक्री भएको पाइएको समिति सं‌योजक गुमादेवी आचार्यले जानकारी दिइन् । आइतवार, कार्तिक ३, २०७६
स्तन क्यान्सर महिलाको दुवै स्तन समान नभई आकार, लेवल र बनौटमा फरक देखा पर्दछ । स्तनको कुनै पनि भागमा दुख्ने वा नदुख्ने लाम्चो आकारको गिर्खा आउँछ । स्तन सुन्निएर कडा भई दुख्न थाल्छ । स्तनको मुन्टाबाट रगत, पीप अथवा फोहर पदार्थ आउनु र ब्रा भिजीरहेका हुन्छन । आइतवार, कार्तिक ३, २०७६
किन बन्दैन पुरुषका लागि गर्भनिरोधक चक्की ! संसारभर प्रजनन गर्ने उमेर समूहका हरेक तेस्रो जोडीले कुनै पनि गर्भनिरोधक प्रयोग नगर्ने गरेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एक अध्ययनले देखाएको छ। शनिवार, कार्तिक २, २०७६
भोकमरीको सूचीमा नेपाल ७३ औं स्थानमा काठमाडौं । ‘ग्लोबल हंगर इन्डेक्स’मा नेपाल ७३ औं स्थानमा रहेको एक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कन्सर्न वर्ल्डवाइड र वेल्थुन्गरहिल्फले संयुक्त रुपमा तयार पारेर सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख छ । सो इन्डेक्समा ११७ मुलुक समावेश गरिएका छन् । बुधवार, आश्विन २९, २०७६
नाइजेरियाका पूर्व कप्तानको ३१ वर्षमै निधन नाइजेरियाको राष्ट्रिय टिमका पूर्व खेलाडी इसाक प्रोमिसको ३१ वर्षकै उमेरमा निधन भएको छ । अमेरिकी क्लब अस्टिन बोल्डबाट व्यवसायिक फुटबल खेल्दै आएका उनको बुधबार राति निधन भएको जनाइएको छ । शुक्रवार, आश्विन १७, २०७६
विषालु च्याउ खाँदा एकै परिवारका ९ जना बिरामी बुटवल- रुपन्देहीमा विषालु च्याउ खाँदा एकै परिवारका नौ जना बिरामी परेका छन् । सम्मरीमाई गाउँपालिका वडा नम्बर–६, नगवलियाका यादव परिवारले बुधबार साँझ घर नजिकैको बाँसघारीमा उम्रिएको च्याउ खाँदा बिरामी परेका हुन् । बिहिवार, आश्विन १६, २०७६
First Prev 19 20 21